ကော်ပိုရိတ်ပွဲများများအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်သောက်အကြံပြုချက်များ - သတင်း Rule
သင်အရာအားလုံးကိုအဖြစ်ချောချောမွေ့မွေ့အတတ်နိုင်ဆုံး run ချင်တဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်အပျက်စည်းရုံးရေးလုပ်တဲ့အခါ. သငျသညျဦးစားပေးသင့်ပါတယ်အရေးပါဆုံးအချက်တွေတစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာအစားအစာနှင့်သောက်ဖြစ်ပါတယ်. အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်အစားအစာနှင့်သင်တို့သည်သောက်ရအဖြစ်အပျက်၏ဤအမျိုးအစားများ၏စီစဉ်သူများအကြောင်းအများကြီးကပြောပါတယ်. ဖြစ်ရပ်များဤအမျိုးအစားများမှာအတော်များများတက်ရောက်သင်စနစ်တကျသင့်ရဲ့ဧည့်သည်များ၏စောင့်ရှောက်မှုယူကြပြီမဟုတ်ကြောင်းလက္ခဏာသက်သေဖြစ်ရသောအဖြစ်အပျက်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ထွက်ခွာ ပတ်သက်. တိုင်ကြား. ဤရွေ့ကားကော်ပိုရိတ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်အချို့သောအစားအစာနှင့်သောက်အတွေးအခေါ်များဖြစ်ကြောင်း.
သင်တစ်ဦးနေ့လယ်စာအဖြစ်အပျက်များလာတဲ့အခါ, ကွဲပြားခြားနားတဲ့တက်ရောက်ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုရှိသည်လိမ့်မယ်. သို့သော်, ထိုကဲ့သို့သောလက်ဖက်ရည်နှင့်ကော်ဖီအဖြစ်အဖျော်ယမကာနှင့်အတူဧည့်သည်အချို့ Mini-မုန်ရာပူဇော်သက္ကာအားဖြင့်စတင်ဖို့. တစ်ဦးထက်ပိုသောသိသိသာသာမုန့်ညက်အကြာတွင်သောနေ့၌ထောက်ပံ့ရပါမည်. This should be followed by dessert and finally tea or coffee once again.
This type of corporate event is less formal than other types of get-togethers. သို့သော်, you should still provide plenty of food and drink to makeagreat impression. A themed night with related food and drinks may be more entertaining than simply providing free drinks.
Attendees probably won’t expectafull dinner at this type of event. သို့သော်, you should provide plenty of snacks to suit all attendee’s requirements. သတိရ, some people have allergies or don’t eat certain foods. This should be taken into account and alternative eating options should be made available to those who attend your event.
← ထက်လျော့နည်းအတွက်နယူးမူးယစ်ဆေးဝါးရယူထားသောစိတ်ကျရောဂါ 24 နာရီ ! [VIDEO] ဆေးခြောက်တကယ်သင့်ရဲ့အိုင်ကျူနိမ့်ပါဘူး? →